Carnegie Mellon University - Study in USA. Waxbarashada Bro Magazine
gaabinta : CMU
aasaasay : 1900
Ha iloobin in aad wada hadlaan Carnegie Mellon University
Qorto Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University waa hay'ad gaar ah oo la asaasay 1900.
Fiiga waxbaridda ee Carnegie Mellon University waa $50,00 (Aprox.).
Carnegie Mellon University, aasaasay by industrialist iyo deeqbixiye Andrew Carnegie, waxa uu ku yaalaa Pittsburgh, oo waxay bixisaa fursadaha cuntada iyo madadaalada iyo sidoo kale kooxaha isboortiga xirfadeed oo ay ku jiraan pingvin ah (hockey), Steelers (kubada cagta) iyo Burcad (baseball). ardayda cusub oo keliya waxaa looga baahan yahay in ay ku noolaadaan on campus, laakiin damaanado jaamacadda guri oo dhan afar sano, iyo inta badan ardayda doortaan in ay ku sii on campus. Ku dhowaad 20 boqolkiiba dadka ardayga xiriir la leh nolosha Greek, taas oo ka kooban in ka badan 20 fraternities iyo faraternitis. The Carnegie Mellon Tartans tartami tartamada NCAA Division III, iyo Kiltie Band ah, oo isboortiga regalia Scottish buuxa, qabata at kasta oo ciyaar kubada cagta guriga.
Carnegie Mellon la og yahay barnaamijyada ay sayniska iyo tiknoolajiyada, laakiinse intii toddoba dugsiyada iyo kulliyadaha ay ka mid College a of Fine Arts iyo College of College Dietrich ee Humanities iyo cilmiga bulshada. barnaamijyada ka qalin Its ka mid ah Tepper Dugsiga sare kaalinta of Business,Carnegie Institute of Technology iyo School of Science Computer. Affarta ee Carnegie Mellon fursad u leeyihiin inay ka qayb qaataan cilmi-baarista iyo xitaa heli kartaa deeq ama garayso xagaaga si ay u taageeraan cilmi-baarista ee ay field of waxbarasho. Randy Pausch, qoraaga buugga New York Times ugu fiican-iibinta “Lecture The Last,” ahaa professor ah ee Carnegie Mellon.
Heinz College: Systems Information, Siyaasadda Dadweynaha iyo Maareynta
saarka War Post-Civil ururtay Xoolo loo arag iyo qaar ka mid ah u xiiseynayey in ay hay'adaha helay magacyadooda oo qayb ka ah olole philanthropy la isticmaalayo qaybo ka mid ah xoolo badan. Washington Duke University ee Duke, Cesraa Cornell at University Cornell, Johns Hopkins ee Johns Hopkins University, Leland Stanford ee Jaamacadda Stanford, John D. Rockefeller at the University of Chicago, iyo Korneeliyos Vanderbilt University ee Vanderbilt waa dhawr tusaale oo caan ah Andrew Carnegie ayaa injiilka ee maskaxda Xoolo iyo Carnegie Mellon University waa mid ka dhalatay sida.
The Dugsiyada Carnegie Technical ayaa la aasaasay 1900 in Pittsburgh by industrialist ee Scottish American iyo deeqbixiye Andrew Carnegie, kuwaas oo ku qoray erayadii waqti u sharrifnay Binii “Qalbigaygu wuxuu la jiraa in shaqada”, markii uu ugu deeqay lacag in la abuuro hay'ad. aragtida Carnegie ayaa ahayd in la furo dugsi xirfadaha tababar wiilasha iyo gabdhaha ee Pittsburghers-xoogsatada (kuwaas oo inta badan soo shaqeeyay ku daqiijin jireen uu). Carnegie waxaa uu ku dhiiraday for design uu dugsiga Machadka Pratt ee Brooklyn, New York aasaasay by industrialist Charles Pratt ee 1887. In 1912 hay'adda ay magaceeda u Carnegie Institute of Technology bedelay (CIT) oo waxay bilaabeen bixiya degrees afar sanno ah. Inta lagu jiro wakhtigan, CIT ka koobnaa afar dugsi dastuurka: Dugsiga of Fine Arts iyo Applied, Dugsiga tababartayaasha iyo Journeymen, Dugsiga Sayniska iyo Technology, iyo Carnegie School Margaret Morrison ee Dumarka.
Machadka Mellon ee warshadaha Research la aasaasay 1913 by walaalaha Andrew Mellon iyo Richard B. Mellon oo lagu sharfayo aabbahood, Thomas Mellon, awowe u ahaa qoyska ugu Mellon. Machadka bilaabay urur cilmi sameeyaa shaqada dowladda iyo warshadaha heshiis oo markii hore la aasaasay sida waaxda gudahood Jaamacadda Pittsburgh. In 1927, Machadka Mellon ku daray sida macaash doon ahayn oo madax banaan. In 1938, dhismaha taariikhi Institute Mellon ayaa la dhameeyey oo u dhaqaaqay cusub, iyo hadda, goobta on Fifth Avenue.
In 1967, iyada oo taageero laga Paul Mellon, Carnegie Tech biirtay Institute Mellon ee warshadaha Research si ay u noqdaan Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon ayaa duwo college haweenka, Carnegie Margaret Morrison ka College xiray 1973 iyo biireen barnaamijyada tacliinta kale ee jaamacadda.
Hawlgalka cilmi warshadaha ee Institute Mellon ka badbaaday midowga sida Carnegie Mellon Machadka Cilmi-baarista ee (CMRI) iyo sii shuqulka heshiis in industry iyo dawladda. CMRI xiray 2001 iyo barnaamijyada ay ahaayeen iyohababka by qaybaha kale ee jaamacadda ama miiqeen off galay hay'adaha madax-bannaan.
Ma rabtaa wada hadlaan Carnegie Mellon University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Carnegie Mellon University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Carnegie Mellon University
Ku biir si uu ugala hadlo ee Carnegie Mellon University.
University of Texas ee Austin Austing